Izikulufu Zensimbi Engagqwali China Manufacturers & Suppliers & Factory
Izikulufu Zensimbi Engagqwali - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Izikulufu Zensimbi Engagqwali)
I-M3x12mm I-rainbow Stainless Steel Button Head Screws Njengoba wazi ukuthi izikulufu ze-aluminium zinombala ohlukahlukene okhethiwe, obomvu, oluhlaza okotshani, onsomi, omnyama, wesiliva, opinki, owolintshi, wegolide. Iningi lezikulufo zensimbi ezingenasici emakethe zinesiliva nombala omnyama. Kodwa-ke sinesibuko...
Amafektri Amanani Aphansi M3 Insimbi ye-Hexagon Izimbotshana zensimbi ye-Plain kufanelekile lapho amandla nenani kuyizimvo eziphambili. Insimbi iqinile futhi ihlala isikhathi eside kepha i-corrosion emincane ayimelani nensimbi engenasici. Ukwenza ngcono ukumelana kwayo nokugqwala, ingathola imvunulo eyengeziwe kanye...
Yenza ngokwezifiso Ikhwalithi ephezulu Yensimbi engu-M3 Lezi ngezikulufo zensimbi eshidi, noma okokuthinta ngezikulufo, zisebenza ngezindlela eziningi futhi zisetshenziselwa ukunamathisela insimbi, ukhuni, i-fiberglass nepulasitiki. Kwenziwe ngensimbi eyenziwe lukhuni, imicu izakhela intambo yayo yokuhlanganisa...
Ikhwalithi ephezulu Yensimbi Engagqwali I-Hex Half Thread Screw Ngezikulufo zensimbi ezingenasici, izidingo zosayizi wentambo wezingxenye zowesilisa zingasetshenziswa. Kuyabonakala ukuthi izikulufu zensimbi ezingenasici zisetshenziswa ebangeni elibanzi ukwedlula amabhele wehange lendabuko. Umklamo uyinoveli, okwenza...
I-Hobbycarbon M3M16 insimbi engenasisekelo yesokhethi cap ikhanda
Ukuthengisa Okushisayo kweHobbycarbon M3M16 insimbi engenasisekelo yesokisi Ukuguquguquka kwesikebhe sensimbi ngensimbi kunamandla ngokwengeziwe. Ngezikulufo zensimbi ezingenasici, izidingo zosayizi wentambo wezingxenye zowesilisa zingasetshenziswa. Kuyabonakala ukuthi izikulufu zensimbi ezingenasici zisetshenziswa...
I-Model No.: SGH430
Incazelo Yomkhiqizo ekhanda ngentambo isokhethi insimbi engagqwali insimbi engagqwali Izikulufu Zensimbi
Insimbi Engagqwali Yekhwalithi ephezulu iBolt Nut
Insimbi Engagqwali Yekhwalithi ephezulu iBolt Nut Isingeniso Somkhiqizo I-Stainless Steel Nut ifaka i-Press nati, ilokhi yokukhiya. Uhlobo lweM4 Stainless Steel High Bolt Nut luhlobo olulodwa lwe-Press nut. Amantongomane angensimbi ephezulu ye-bolt ngokuvamile umbala wemvelo. Ngaphandle Kwensimbi Engagqwali, sinikeza...
Izikulufu Zensimbi Engagqwali Izikulufa Zensimbi Engagqwali Izikulufu Zensimbi Engagqwali M3 Izikulufu Zensimbi Engagqwali 316 Isikulufa Sensimbi Engagqwali Izipikili Zensimbi Engagqwali Izikulufu Zensimbi Engagqwali ne-Aluminium Izikulufa Zokubumba Insimbi Engagqwali
Izikulufu Zensimbi Engagqwali Izikulufa Zensimbi Engagqwali Izikulufu Zensimbi Engagqwali M3 Izikulufu Zensimbi Engagqwali 316 Isikulufa Sensimbi Engagqwali